वर्षेनी सिन्धुपाल्चोकमाथि नै किन यस्तो बज्रपात ? | Butwal Dainik
वर्षेनी सिन्धुपाल्चोकमाथि नै किन यस्तो बज्रपात ?
काठमाडौँ, भदाै १ । वि.सं. २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी प्राकिृतक विपत्ति र दुर्घटनाले झन ठूलो पीडा थपिदिएको छ । प्रकृतिले दिएको विपत्तिले यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले नपुगेर अझै यहाँ सडक तथा हवाई दुर्घटनासमेत थपिने गरेकाले पछिल्ला केही वर्षमा विपत्ति नै सिन्धुपाल्चोकको नियति बन्न पुगेको छ ।
विसं २०७१ पछिदेखि नै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले वर्षेनीजसो ठूला प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाको सामना गरिरहनुपरेको छ । यस्ता दुर्घटनाबाट यो वर्ष मात्रै यस जिल्लामा सयौँ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ पाइन्छ । गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार बिहान आएको पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाको लिदी गाउँ नै पुरिँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो ।
पानी रोकिएपछि बिहानको मिरमिरेमै आएको पहिराले धरै वर्षपछि साकार भएको सडक र बिजुलीसँग घुलमिल हुने अवसर चुँडेर लगेपछि अहिले पुरै लिदी गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । उक्त गाउँको भौगर्भिक बनावट कमजोर रहेकोले माथिको डाँडाबाट कुनै पनि बेला पहिरो खस्न सक्ने अनुमान यसअघि नै विज्ञहरुले गरेकै थिए । त्यसैले पनि निम्न आर्थिक अवस्था भएका यहाँका स्थानीयसहितलाई सार्न जुगल गाउँपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष प्रताप लामाले बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै त्यहाँबाट उक्त बस्ती स्थानान्तरणको माग राख्दै जिल्लादेखि प्रदेश हुदै केन्द्रसम्म निवेदन दिएको बताए ।
यहाँको निम्न आर्थिक अवस्था भएका सर्वसाधरणले तत्काल बस्ती सार्नसक्ने सम्भावना थिएन । वडा अध्यक्ष लामाले भावुक हुँदै भने, “जाने ठाउँ पनि अन्यत्र कतै नभएपछि पटकपटक जोखिम भयो बस्ती सारिदिनु पर्यो भन्दै जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म निवेदन दियौँ कसैले सुनेन, आज यो क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।”
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाउन परीक्षण भइरहँदा गत असार ३० मा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित मुहानन जिकैको फ्लसिङ अडिटको ढोका खुलेर चार कर्मचारीलाई गाडीसहित बगाएको थियो ।
घटनामा परेका तीन इञ्जिनीयरमध्ये एकको मृत्यु भएको छ भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका दुई उपचारत छन् । एक जना कर्मचारी अझै फेला परेका छैनन् । पानी पठाउन परीक्षणका क्रममा सुरुङको १७ नं गेट भत्किँदा भएको उक्त दुर्घटना छानबिन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव रमाकान्त दुवाडीको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समितिसमेत गठन गरेको छ ।
शक्तिशाली परकम्पपछि ६ जना अमेरिकी र दुई जना नेपाली सेना लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दोलखाका लागि उडेको उक्त हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको सुनखानीमा पुगेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो ।
गोरखा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर २०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न गएको ७.६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पबाट देशमै सबैभन्दा ठूलो जनधनको क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भयो । दिउँसो ११ बजेर ५६ मिनेटमा आएको भूकम्पमा परी तीन हजार ५७१ जनाले ज्यान गुमाए । यस विनाशबाट असी हजार निजी घर संरचना माटोमै मिले । सरकारी तथा सामुदायिक भवन संरचना ढले, विद्यालय भवन भग्नावशेषमा परिणत भए । नेपालकै सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको सिन्धुपाल्चोक अझै पनि पूर्णरुपमा तङ्ग्रिन सकेको छैन । यसैमाथि झनभन्दा झन ठूला बिपत्ति थपिएपछि यहाँबा बासिन्दा निराश छन् ।
भोटेकोशी नदी नै थुनिने गरी आएको कहालीलाग्दो पहिरोको प्राकृतिक दुर्घटनामा परी धेरैको घरबास नै गुम्यो र बेसहरा बने । अझै पनि धेरै घाइतेको उपचार र राहत नपाउँदाको गुनासो सकिएको छैन । पहिराले कतिको घरजग्गा गुम्दा गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्यो । जुरेको यो ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले धेरैलाई बिर्सनै नसक्ने छाप छोडेर गयो ।